Vehivavy vitsivitsy ao amin’ireo filazantsara
"Hoy Izy (Jesosy) taminy: Nahoana ianareo no mampalahelo an-dravehivavy? fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa Izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva." Matio 26:10,11
Maro ny fanoharana iresahan’i Jesosy ny fiainana andavanandron’ny vehivavy. Asa aman-draharaha isan-karazany no ataon’izy ireo, ary amin’izany no ampisehoany lafiny samihafa amin’ny fiainan’ny mpianatr’i Kristy. Ao ilay mpitondratena nahazo rariny teo anatrehan’ilay mpitsara tsy marina, ao ilay vehivavy nikaroka ny farantsany very; samy maneho faharetana izy ireo. Ao ny zazavavy nanomana solika atao ao amin’ny fanalany, eo am-piandrasana ny Tompo, sns. Ny tsirairay amin’ireo ohatra ireo dia mampiseho lafiny amin’ny fahitan’i Jesosy ny fihetsika sy asan’ireo vehivavy nifanerasera taminy.
Nony nomen’i Marta tsiny Jesosy, satria tsy niteny an’i Maria mba hanampy azy, dia nahagaga ny valinteniny: “Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina ianao; nefa zavatra iray loha no ilaina ; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” (Lioka 10:41,42). Izany valinteny izany dia mitaona antsika hikatsaka “ny anjara tsara”, izany hoe ny fihainoana ny tenin’i Jesosy.
Maro koa ny vehivavy tanisain’i Jesosy ho ohatra: mpitondratena, nanolotra ireo farantsa kely sisa tany aminy ho an’ny raharaha tao an-tempoly; Maria, satria nalala-tanana sy niraiki-po tamin’i Kristy; na koa ilay vehivavy hafa firenena, nangataka tamin’i Jesosy hanasitrana ny zanany vavy. Voakasiky ny finoan’ilay renim-pianakaviana ny fon’i Jesosy, ka niteny taminy hoe: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao” (Matio 15:28). Nidera ny finoan’io vehivavy hafa firenena io Jesosy, ary asehony amin’izany fa tsy amin’ny Jiosy ihany no anehoan’Andriamanitra ny tenany, fa amin’izay rehetra manatona Azy am-pinoana, na iza na iza.